पावर उपकरण - Kangton उद्योग कं, लिमिटेड
इलेक्ट्रिक ह्यान्ड मिक्सर
कार हेरचाह उपकरण
कार ब्याट्री चार्जर
कang्गटनका बलियो र शक्तिशाली ए gr्गल ग्रिन्डरहरूको दायराबाट, शुरुवातकर्ताहरू, महत्वाकांक्षी DIY उत्साहीहरू र विज्ञहरू सबैले फेला पार्नेछन् कि उनीहरूले के खोजिरहेका छन्। हाम्रो उपकरणहरूले धातु, ढु stone्गा र सिरेमिकलाई अलग गर्ने, पीस्ने, स्मूथिंग र डस्टिंगको साथसाथै मोटे र डिब्रि deb्गको प्रकाश कार्य गर्दछ।
DIY काठ काम गर्ने, नविकरण, सिकर्मी र शिल्प गर्न, Kangton बहु-सतह Sanders को संग्रह विभिन्न अनुप्रयोग र प्रयोग प्रदान गर्दछ। तपाईंको DIY प्रोजेक्टहरूमा राम्रो फिनिश समाप्त गर्नुहोस् र निकिसहरू र वरपरका कुनामा विस्तृत विवरणहरू। साथै, तपाईंको कार्यक्षेत्र सफा धुलो संग्रह प्रणाली र कम गडबडी ईन्जिन संग कहिल्यै सजिलो भएको छैन!
यदि तपाईं आफ्नो सवारीलाई एक नयाँ चमक दिन चाहनुहुन्छ भने, एक पालिशिंग मेशिनले राम्रो सेवा प्रदान गर्दछ। यदि तपाईं बहुउद्देश्यीय उपकरणको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने, कोण पालिसर तपाईको लागि उत्तम विकल्प हो किनभने यसलाई अन्य चित्रित सतहहरू र भुईहरूको उपचारको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनुलग्नक र गति सेटि speedमा निर्भर गर्दै, यस उपकरणले काठ, धातु र प्लास्टिकमा गरिएको साधारण ग्राइन्डिंग / स्यान्डिंग कार्य पनि प्राप्त गर्दछ।
यदि तपाईंसँग ठूलो पैमानेमा ईन्टरि finishर फिनि। गर्ने वा नविकरण गर्ने काम सम्बन्धी छ भने, तपाईंले आरा किन्नबाट बच्न सक्नुहुनेछैन। विशेषज्ञहरु र महत्वाकांक्षी कारीगरहरु को लागी उनिहरु जिग्स, हातले आयोजित गोलाकार आरी र Kangton देखि सार्वभौमिक आरी देखि खोजिरहेका छन्। जिगसले काठ, प्लास्टर र ढु stone्गा र धातु मार्फत काम गर्दछ सटीकताका साथ कामका लागि सही आरी ब्लेड प्रयोग गरेर। गोलाकार आरा सीधा कटौती र धातु, काठ, प्लास्टिक, प्लास्टरबोर्ड, ढु stone्गा र टाइलहरूमा माटर कटौतीको लागि पेशेवर सहायक हो। विश्वव्यापी आरा अधिकतम लचिलोपनका लागि डिजाइन गरिएको हो र उत्कृष्ट फेसनमा काम गर्ने कार्यहरूको विशाल स्पेक्ट्रम प्रदर्शन गर्दछ र जब चाँडो आरी प्रगति आवश्यक पर्दछ वास्तवमा यसको आफ्नै आउँछ।
कर्डलेस स्क्रू ड्राईभरहरू उपकरणहरू बीचका अलराउन्डरहरू हुन् र कुनै पनि परिवार तिनीहरू बिना हुनु हुँदैन। यदि तपाईं आफैंले हातबाट शिकंजा कसको कष्टलाई बचाउन चाहनुहुन्छ भने, ताररहित स्क्रू ड्राईभर तपाईंको लागि हो। एक ताररहित ड्रिल / स्क्रूड्रिभर, अर्कोतर्फ, हथौड़ा कार्यको साथ वा बिना, एक ड्रिलको साथ कर्डलेस स्क्रू ड्राईभरको फाइदाहरू संयोजन गर्दछ। Kangton गहन उपयोग को लागी पर्याप्त शक्ति र बृद्धि ह्यान्डलिंग को लागी साना उपकरण संग दुबै पेशेवर उपकरण प्रदान गर्दछ।
१२ "र १" "ब्लेड कट-अफ मेशिनहरूको साथ, कang्गटनसँग तपाईंलाई कुनै पनि कामको लागि आवश्यक पर्ने कट-ऑफ आरे छ, जस्तै पाइप, स्टिक, कोण, च्यानल स्टील, स्टील विन्डो सामग्री र कठोरताको धातु, आदि। यो शक्तिशाली छ र एक परिशुद्ध कटौती हुन्छ।
कang्गटन रोटरी हथौड़ा र विध्वंस हथौड़ा यसको सबै लामो आवश्यकताहरू, प्रीमियम गुणस्तर र प्रभावशाली शक्ति को लागी सबै आवश्यकताहरु पूरा गर्दछ। Kangton हथौड़ा कुनै पनि स्थिति र कुनै मजबूत सामग्री सूट।
यो विशेष गरी पुरानो पर्खाल फिनिशिंगहरू हटाउन र प्लान्डबोर्डबोर्ड जोड्ने स्यान्डिंगका लागि डिजाइन गरिएको छ ताजा प्लास्टर वा पेन्टको लागि राम्रो तयारी पूरा गर्न। इकाईले सुरक्षित रूपमा सुरक्षित गरिएको धुलो हटाउनको लागि सफा भ्याकुम प्रणाली समावेश गर्दछ - तपाईंलाई स्वच्छ, स्वस्थ, धूलो रहित कार्य वातावरण कायम गर्न मद्दत गर्दछ।
पोष्ट प्वालहरू खन्नका लागि प्रयोग हुने एक आयुगर, यो म्यानुअली मोडिएको, ह्यान्डहेल्ड उपकरण हुनसक्दछ, वा इलेक्ट्रिक मोटर वा पेट्रोल इञ्जिनद्वारा सञ्चालित हुन सक्छ, यो बगैंचा रोपणको लागि प्वाल बनाउने, आइस मछुवाहरू मार्फत माछामा प्वालहरू छिर्नका लागि एक आदर्श उपकरण हो। र म्याप्पल सिरप निकाल्न म्याप्पल रूखहरूमा ड्रिलिंग पनि एजर्सको प्रयोगमा गरिन्छ।
मिक्सर एक मात्र समय खपत तर कडा र थकाउने मात्र होइन। यहाँ धैर्यता वा ऊर्जा को कमी को पनि गरीब परिणाम को लागी। मद्दत एक इलेक्ट्रिक आंदोलनकारीको रूपमा हात मा छ। विशेष गरी जब यो ठूलो खण्डहरू मिक्स गर्न आवश्यक पर्दछ, र and र मोर्टार स्टिलर एक विशाल मद्दत हो। एक व्हिस्क-जस्तो एट्याचमेन्टको साथ फिट, यस मिक्सनको केही समय पछि मिक्स गरीन्छ।
Kangton बाट योजनाकारहरू घर, बगैंचा र कार्यशाला वरिपरि प्लानिंग कार्य को एक किसिम को लागी उपयुक्त छन्। तिनीहरूले काठको सतह प्रशोधन, तह र किनारा chamfering सजिलो बनाउँछ। हाम्रो इलेक्ट्रिक योजनाकारहरू ब्लेड रोलरसँग काम गर्दछन् जसमा थुप्रै काट्ने किनाराहरू घुमाइन्छ र सामग्रीबाट चिप्स हटाउँदछ। तिनीहरू छिटो, अधिक सटीक र एक हात-नियोजित योजनाकार भन्दा शक्तिशाली छन्। यदि केवल तपाईं त्यो पहिले थाहा पाउनु हुने थियो ...
Kangton Sanders सही सबै राउन्डरहरू हुन्। भित्री डिजाइनदेखि नविकरण र पुनर्विकासको कामदार र शिल्प कार्यमा, अनुप्रयोगको क्षेत्रहरू प्रशोधन गर्न सकिने सामग्रीको दायरा जत्तिकै फरक हुन्छन्। Kangton बेल्ट Sanders को एक विस्तृत श्रृंखला को प्रस्ताव, घुमाउने Sanders, डेल्टा Sanders र कक्षीय Sanders। त्यसोभए तपाईले आफ्नो घर सुधार प्रोजेक्टको लागि आवाश्यक उपकरण पाउनुहुनेछ। जो उपकरण को लागी हेरिरहेका छन् कि जति सक्दो लचिलो छ व्यावहारिक बहु स्यान्डर प्रयोग गर्न सक्दछन्।
यदि तपाईं कहिले घर जानु भएको छ भने, तपाईं एक ड्रिल को अपरिहार्य फाइदाहरूको बारेमा सबै थाहा छ। हाम्रो प्रभाव अभ्यास सफलतापूर्वक पनि चिनाई, ढु stone्गा वा टाईल्स को रूप मा हार्ड सामग्रीहरु लाई पनी आफ्नो प्रभाव संयन्त्र को लागी धन्यवाद। दुबै शौक DIY उत्साहीहरू र महत्वाकांक्षी प्रयोगकर्ताहरू उनीहरूले केangटनको उत्पादनहरूको दायरामा खोजिरहेका छन्।
विद्युतीय प्रभाव रेन्चहरू, अहिले धेरै लोकप्रिय भएका छन्। तिनीहरूसँग हावा प्रभाव रेन्चहरूसँग समान गति र क्षमता छ, तिनीहरू व्यापक रूपमा धेरै उद्योगहरूमा प्रयोग गरिन्छ, जस्तै मोटर वाहन मर्मत, भारी उपकरण मर्मत, उत्पाद सम्मेलन, प्रमुख निर्माण परियोजनाहरू, र कुनै पनि अर्को उदाहरण जहाँ उच्च टोक़ आउटपुट आवश्यक छ।
DIYers र handyman को सब भन्दा राम्रो साथी: इलेक्ट्रिक हात देखा! महत्वाकांक्षी शुरुवातकर्ता र पेशेवरहरूको लागि उत्तम - इन्हेलको जर्मन-डिजाइन वर्कशॉप स, काठ, धातु, प्लास्टिक, प्लास्टरबोर्ड र ढु stone्गाका लागि पनि आदर्श हो। सटीक कार्यको लागि जोगसाबाट छान्नुहोस्, सिधा र माटर कटौतीको लागि गोलाकार आरे, र अधिकतम अनुप्रयोग लचिलोताको लागि सार्वभौमिक आरी।
बहु र paint्गीन र हावा प्रवाह समायोजन विकल्पहरूले तपाईंलाई ढोका, झ्यालहरू, भित्ताहरू, फेंसहरू, डेकिंग, सिलि ,हरू, फ्लोरहरू, क्याबिनेटहरू, घर फर्निचरहरू, र अन्य वस्तुहरू समान रूपमा र धेरै, कम शक्तिशाली पेन्ट स्प्रेयरहरूको तुलनामा उच्च गुणको साथ कोट गर्न अनुमति दिन्छ।
ठेगाना: Rm.1302, हवेली, No.210 Siping Rd।, शंघाई, 200086, चीन
फोन:+86 21 55 55१15१16११
फ्याक्स:+86 २१ 55 55१9770०